Apartment#Modern#Balcony#Sunshine#Mauterndorf - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarieken
I-Haus Katris ikwi-250m ukusuka kwiziko lelali kunye nenqaba.
Indawo yakho (35m²) ixhotyiswe ngabantu aba-2 ukuya kwaba-4 kwaye ibekwe kumgangatho ophantsi okanye kumgangatho wokuqala. Ibonisa ithala elijonge emazantsi okanye i-balcony.
Kukho igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini (160 x 200cm) kunye nebhedi ephezulu, indawo yokutyela ekhitshini enekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokutyela kunye nendawo yokuhlala (okanye ibhedi eyongezelelweyo ephindwe kabini yesofa (160 x 200cm)), igumbi lokuhlambela elineshawa kunye neWC. kunye TV / DVD kwi Diner ekhitshini phezu kodonga.
Indlu yethu ibekwe ngokulula kumda welali, kumgama wokuhamba kwiziko lelali yakudala. Ngaphantsi kwe-100m uya kufumana indawo yokubhaka kunye ne-radius ye-250m ivenkile enkulu, iikhefi ezininzi ezipholileyo / ii-pubs kunye neendawo zokutyela ezininzi ezilungileyo kwibhajethi nganye.
Ihlobo eMauterndorf liyaguquguquka kwaye liyahluka. Nokuba uza kukhwela intaba, ukhwele iintaba okanye ibhayisekile yeentaba, okanye ujonge omnye umngeni okanye ukhetha ukufumana indalo, ngokuqinisekileyo uya kufumana into efanelekileyo nathi. Indawo enkulu yemidlalo kamasipala imalunga nama-250m ukusuka kwindlu yethu. Uya kufumana, phakathi kwezinye izinto, ichibi lokuqubha elingaphandle elingama-1035m², elitshiswe ngamandla elanga, elinesilayidi esikhawuleza kakhulu.
Unathi ungonwabela iindawo ezi-4 ezahlukeneyo zokutyibiliza ekhephini, nganye inomlinganiswa wayo kwaye idibene ilungile malunga neekhilomitha ezingama-300 zamathambeka kunye neelifti ezingama-50, kunye nokupasa okufanayo kokutyibiliza. Ukusetyenziswa simahla kwebhasi ye-ski ngokuqinisekileyo kubandakanyiwe! Indawo yokumisa ibhasi yi-75m ukusuka kwindlu yethu kwaye ibhasi ye-ski ikuthatha kwimizuzu emi-5 ukuya kwiziko le-ski yaseMauterndorf, kodwa ngokukhawuleza kakhulu ukuya kwiindawo ezijikelezileyo ze-ski ezifana neKatschberg-Aineck, Obertauern kunye neFanningberg.
Singabokuqala ukumisa elalini, ke hlalani igumbi!
Umbuki zindwendwe ngu- Marieken
Sirenta amagumbi ama-4 ahlaziyiweyo kwaye ngenxa yokuba sihlala kwinxalenye yomgangatho ophantsi ngokwethu, sihlala sifumaneka ngokobuqu ngexesha lokuhlala kwakho.
Inombolo yomthetho: 50504-008065-2020
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mauterndorf